Ukukhupha - Isitshixo seenwele zakho ukuba zikhule ngokukhawuleza | IBezzia
USusana godoy | 07/04/2021 12:00 | Ubuhle
Ayiloxesha lokuqala ukuba sifune ukubona ukuba iinwele zethu zikhula njani ngokukhawuleza. Ewe, ngokuqinisekileyo sele udiniwe kancinci kukukhangela zonke iintlobo zezisombululo zayo. Namhlanje siza kubona enye yezona zixhaphakileyo, esinazo kwiminwe yethu kodwa mhlawumbi asisoloko sikunika ukubaluleka kokuthwala: ukukhutshwa.
Kuba njengoko kusenzeka kuwo wonke umzimba, ukukhutshwa komzimba yinkqubo eya kuphucula kakhulu ulusu lwethu. Kungenxa yoko ukuba sicinga ngeenwele, okanye kunoko isikhumba sentloko, ayizukushiyeka ngasemva. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka uwalandele?
1 Kutheni le nto ukukhutshwa sisitshixo kukukhula ngokukhawuleza kweenwele?
2 Ukukhupha i-scalp ngekhofi
3 Iswekile kunye neoyile yeoli yeenwele zakho
4 Iswekile kunye nemon
Kutheni le nto ukukhutshwa sisitshixo kukukhula ngokukhawuleza kweenwele?
Njengoko sisazi kakuhle, I-exfoliate ithi ndlela ntle kwiiseli ezifileyo. Ke ngoko, xa siyenza eluswini, siya kukuphelisa konke ukugqitha, ukwenza indawo yokuphucula. Kule meko, kwenzeka into efanayo kuba into esiza kuyenza kukukhupha isikhumba sethu, esisoloko siyifuna. Yindawo apho amanqatha athambekele ekuqokeleleni kwiimeko ezininzi, ngelixa kwezinye kungumqwebedu. Ngokukhutshwa kakuhle siya kuthi sincede ulusu kule ndawo, sithi ndlela-ntle kwiintsalela ezithile zeemveliso ezihlala ngamanye amaxesha ezinweleni nasekukhuthazeni ukujikeleza ukuze iinwele ziqale ukukhula zomelele kunakuqala. Ungayibona yonke le mibulelo ngokusebenzisa amayeza endalo esiwacebisayo.
Ukukhupha i-scalp ngekhofi
Ikofu umgubo yenye yezona ndlela zisetyenziswayo xa sifuna ukukhupha. Ukongeza, sisithako sonke esinaso ekhaya ngokuqinisekileyo. Ke, siza kudinga iipuni ezine zekofu ukuqala ukulungiselela umxube wethu. Kodwa ukuze i-massage igqibelele ngakumbi kwaye kube lula nangakumbi kuthi, akukho nto ifana nayo Xuba ikofu kunye neepuni ezimbini zeyogathi yendalo okanye ukuba awunayo, ioyile encinci yekhokhonathi. Ke oku kuyasinceda ngakumbi xa sisenza umyalezo. Oku kuyakuba kunye neminwe, ngaphandle kokusebenzisa uxinzelelo oluninzi kunye nokugubungela yonke indawo kakuhle.
Iswekile kunye neoyile yeoli yeenwele zakho
Olunye ukhetho lokwenza ukhuphelo kukusinceda ngeswekile. Iigranite zakho ziyakusishiya nesiphumo esihle ukuba siqwalasele. Kodwa kuyinyani ukuba kuya kusoloko kufuneka siyidibanise nenye into, ukuze icwebezele ngakumbi kulusu. Kule meko, iya kuba yioyile yomnquma. Njengoko sisazi kakuhle, oku Unoxanduva lokubonelela nge-hydration, ukongeza ekupheliseni zonke iintlobo zenkunkuma kunye nokusinika ii-antioxidants. Le yenye yeembono esizithandayo ukuze kube lula ukuyiphumeza kunye neziphumo zayo ezilungileyo.
Iswekile kunye nemon
Esi sixhobo sigqibelele kubantu abanesikhumba seenwele ezinamafutha. Kuba njengoko sisazi ilamuni iya kuba noxanduva lokulawula i-sebum. Ke ngayo, iswekile iya kufika, eya kuthi kwakhona ibe noxanduva lokurhuqa lonke ukungcola esinako. Unyango olunje, akukho nto ifana nokuba nenani elifanayo lesithako esinye kunye nesinye. Kwakhona, khumbula ukuba ilamuni kwizinwele zakho, ukuba ufumana ilanga, inokuyenza ikhanye. Ke, ezi ntlobo zeembono zihlala zenziwa ngcono ebusuku xa singasazukuphuma. Iinwele zakho kufuneka zibe mfuma ngandlela ithile xa usiya kuzisebenzisa. Ukusuka apha, uya kuqala nge-circular massage kwaye emva kwemizuzu embalwa, unokuzihlamba iinwele zakho njengesiqhelo. Ngokuqinisekileyo uya kuyibona ngokukhawuleza!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Ukukhutshwa sisitshixo sokwenza iinwele zakho zikhule ngokukhawuleza